'सुन तस्करी र सनम हत्याबारे सार्वजनिक भएका कल रेकर्ड अवैध' | Citizen Post News
'सुन तस्करी र सनम हत्याबारे सार्वजनिक भएका कल रेकर्ड अवैध'
२०७५ असार ११ गते २०:०५
काठमाडौँ । ३३ केजी सुन काण्ड र सनम हत्या प्रकरणबारे विभिन्न ब्यक्तिले कुराकानी गरेका कल रेकर्ड सार्वजनिक भइरहेका बेला नेपाल टेलिकमले ल्याण्डलाइन र मोबाइल फोनमा गरिएको कुराकानी रेकर्ड गरी अभिलेख राख्ने प्रविधि नै नरहेको खुलसा गरेको छ । टेलिकमले नै कल रेकर्ड गरी अभिलेख राख्ने प्रविधि नभएको बताइसकेको अवस्थामा सो प्रकरणसँग जोडिएर बाहिरिएका सवै कल रेकर्ड अवैध सावित हुने भएका छन् । अदालतले आफुखुसी रेकर्ड गरी राखिएका कल रेकर्ड र आफुलाई बचाउन अदालतमा पेश भएका प्रमाणलाई अब वैध वा अवैध के मान्ने ? बहशको विषय बनेको छ ।
यद्यपि टेलिकमले कुन ग्राहकले कुन नम्बरमा फोन गरेर कति मिनेट कुराकानी गरे भन्ने अभिलेख अर्थात (कल डिटेल) रहने जनाएको छ । मानिसले फोनमा कुरा गरेको आवाज भने रेकर्ड नहुने टेलिकमले स्पष्ट पारेको छ । ३३ केजी सुन काण्ड र सनम हत्याका विषयमा विभिन्न रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि टेलिकमप्रति जनविश्वास संकटमा परेको थियो । टेलिकमले नै कुराकानी गरेको आवाज रेकर्ड गर्ने प्रविधि नै नहुने बताइसकेको अवस्थामा सो प्रकरण सम्वन्धि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका कल रेकर्डले कानुनी मान्यता पाउलाँ कि नपाउँला ? चासोको विषय बनेको छ ।
टेलिकमका सहप्रवक्ता शोभन अधिकारी भन्छन्, 'प्रहरीमा उजुरी परेर वा अदालतले आवाजको अभिलेख राख्न आदेश दिएको खण्डमा मात्र रेकर्ड गर्ने प्रविधि जडान गरिन्छ, तर सबै टेलिफोन र मोबाइलको कुराकानी गरेको अभिलेख राख्ने प्रविधि, उपकरण एवं भौतिक संरचना टेलिकमसँग छैन ।' त्यसो त, ग्राहकले कुन नम्बरमा फोन गरेर कति मिनेट कुराकानी गरे भन्ने अभिलेखसमेत सम्बन्धित ग्राहकबाहेक अरुलाई दिने नगरेको टेलिकमले जनाएको छ । प्रहरीमा उजुरी परे वा अदालतमा मुद्दा परेको अवस्थामा सम्वन्धित संस्थाले लेखेको पत्रका आधारमा मात्र त्यस्तो अभिलेख उपलब्ध गराउने अभ्यास छ ।
आधुनिक मोबाइलका सेटमा भने आवाज नै रेकर्ड गरेर राख्ने विभिन्न एप्स जडान गरिएको हुन्छ । यसरी जडान गरिएको एप्सको सहयोगबाट भने कुनै पनि ब्यक्तिले कुराकानी गरेको रेकर्ड राख्न सक्छ । यसरी गरिएको कल रेकर्डलाई टेलिकमको प्रविधिले गरेको भनी नबुझ्न पनि टेलिकमले सबैमा अनुरोध गरेको छ । संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था भएको गोपनीयताको हकबमोजिम टेलिकमका ल्याण्डलाइन र मोबाइल फोनमा कुराकानी गर्न सुरक्षित रहेको सहप्रवक्ता अधिकारीले बताए । (फोटोः मिडिया फाइल, राससको सहयोगमा तयार पारिएको खबर)